Goobaha Khadka Tooska ah ee Talyaani - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
Talyaaniga heer sarre ah ayaa caan ku ah jacaylka khamaarka iyo khatarta, hase yeeshee, Dawladda Talyaanigu waxay qaadatay wakhti dheer si ay u sharciyeeyaan noocyada khamaarka. Sababta fekerka adag ee aaggan loo qabtay waxay ahayd in 90-meeyadii dadka intiisa badani diidanayn madaddaalada noocan ah. Waxaa laga yaabaa in tani ay sabab u tahay xaqiiqda ah in khamaarka, inbadan oo xiriir la leh Mafia. Laakiin waqti ka dib, arrimihu way is beddeleen oo tobanaankii sano ee u dambeeyay waddanku wuxuu si xawli ah ugu kordhay caan ka ahaanshaha khamaarka.
Ogaysiis ku saabsan booqdayaasha galka khamaarka ee khadka tooska ah in nooca khamaarka ee Talyaanigu hada ku wajahan yahay looga hortago leexsiga lacagta ciyaartoyda Talyaani ee dibada. Si loo "dhexgalo" dadka maxalliga ah, ee u baxaya inay dibadda ku ciyaaraan, dhammaan waddamada casinos waxay ku yaalliin xudduudaha gobollada deriska ah.
2007, Talyaanigu wuxuu sharciyeeyay ciyaaraha kaararka oo ku saleysan xirfadaha iyo farsamada gacanta, awooddii ugu dambeysay iyo noocyada kale ee khamaarka sharciyeysan. Hay'ad rasmi ah oo nidaamisa khamaarka talyaaniga waa AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), oo ku howlan kormeerka iyo bixinta rukhsadaha. Ciqaabta jabinta sharciga way ka duwanaan kartaa - ganaax ilaa xabsi.
Liiska ugu sareeya ee 10 Talyaaniga Online Casino
Khamaarka internetka ee Talyaaniga
Khamaarka khadka tooska ah ee Talyaaniga ayaa si rasmi ah loo oggol yahay. Sida laga soo xigtay sahanno kala duwan, khamaarka khadka tooska ah waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee madadaalada Talyaaniga. Maaha wax la yaab leh, dakhliga ka soo gala khamaarka khadka tooska ah ee talyaanigu sannad walba wuu sii kordhayaa. Ilaa hadda, ciyaartoyda Talyaaniga waxay u furan yihiin labada bog ee qamaarka internetka ee Talyaaniga iyo goobaha khamaarka shisheeye. Si kastaba ha noqotee, mas'uuliyiintu waxay si dhaw ula socdaan oo u xakameeyaan hawlahooda. Sida ku xusan sharciga khamaarka khadka tooska ah ee Talyaaniga, bixinta adeegyadooda dalka oo dhan, dhammaan hawlwadeennada waxaa looga baahan yahay inay helaan shati gaar ah. Waad ku mahadsan tahay siyaasaddan, warshadaha ciyaaraha Talyaanigu way koraan, horumariyaan oo noqdaan kuwo faa'iido badan leh oo soo jiidasho u leh maalgashadayaasha shisheeye.
Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoyda talyaaniga
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Talyaaniga, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta illaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Waxa kale oo aad akhriyi kartaa dib u eegista boggaga internetka ee khadka casriga ah, si aad u ogaatid dhiirigelinta internetka ugu fiican, gunnooyinka iyo fursadaha lacag bixinta ee loo heli karo ciyaartoy talyaani ah.
Safarka CasinoToplists wuu socdaa markanna waxaan ku istaagi doonnaa guriga erayga "casino" - qorrax ka soo baxa Talyaaniga. Taariikh ahaan, khamaarkaas waxaa loo yaqaan "casino", in kasta oo Talyaanigu - ay tahay uun “guri”.
Talyaniga - juqraafiga iyo taariikhda oo kooban;
Dabeecadda taariikhda ee khamaarista aragtida taariikhiga ah ee laga soo bilaabo 1919 ilaa maanta;
Waxaa jira khadka 5 ee xudduudaha dalka;
maaddaama 2010 loo ogol yahay inay ka ciyaaraan casino online ah.
Shan goobood oo ka mid ah caasimadda Rome ee caasimada;
Macluumaad xiiso leh oo ku saabsan dalka iyo dadka deggan.
Goobta Talyaaniga iyo asalka taariikhda gaaban
Jamhuuriyadda Talyaniga - waa geeska saaxiibtinimada leh ee Dunida Duugga ah, gogosha ilbaxnimada iyo matxaf hawada u furan.
Magaciisa jilicsan ee dalka ayaa laga helay deriska Qubrus, laakiin qiimahiisu waa mid aad loo iibsado - waddanka weylaha.
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in muddo dheer, waxay ahayd dibi ay calaamad u ahayd dadka, inta badan lagu sawiray silsilada Roman jiifay.
Caasimadii Talyaaniga - Rome qurux badan, qalbi ayaa ku duugmay iyadoo la ilaaway Boqortooyadii Roomaanka, oo ah magaala weligeed jirta, oo dad badan u soo halgantay. Maanta waxay hoy u tahay in ka badan 4 milyan oo qof, dad badan oo soo booqda. Rome waxay noqotay run ahaantii cosmopolitan, waxaa jira marti dabeecad wanaagsan oo ku siiya iyaga baashaal badan. Laakiin tiradooda kuma jiraan ciyaaraha khamaarka si loo ciyaaro, waa inay aadaan sharciyeynta aagga ganacsiga. Waxaa jira martida martida loo yahay Roulette, Punto Banco, Blackjack iyo ciyaaro soddon ama afartan, craps, Chemin de Fer, iyo qof walba oo jecel, turub.
Waxay noqon laheyd karaamo in la aado Talyaaniga kaliya casino, maxaa yeelay waxaa jira, laga yaabee, mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan adduunka ee soo jiidashada: qalcadaha, qalcadaha, buundooyinka, daaraha waaweyn, maqaayadaha, beeraha canabka ah, tiyaatarada, matxafyada iyo kuwo kaloo badan oo la yaab leh.
Burburinta iyo khamaarka ee Talyaaniga
In kasta oo Talyaanigu aad u taxaddar la'aan yahay, illaa iyo hadda heer qaran waa in aan la furin Khamaarista guryaha, Saldhigyada, casinos khaas ah iyo xitaa hoolalka mashiinnada ciyaarta. Si kastaba ha noqotee, dhowr casinos oo Talyaani ah ayaa ah.
Khamaarista iyo Talyaanigu inay u istaagaan qarniyaal, dadku way kulul yihiin waxayna jecel yihiin inay ciyaaraan, laakiin Katooliga ayaa aragti aan fiicnayn ku leh xilligan madaddaalada ah. Masuuliyiintu waxay sameeyeen tanaasul iyo dambi sharciyeysan si uu u bilaabo inuu difaaco danaha qaranka.
Dawladdu waxay si fiican uga warqabtaa in haddii mamnuucista khamaarka gebi ahaanba, ay lacag ka soo bixi doonto guryaha khamaarka ee dalalka deriska ah, taas oo gabi ahaanba aan la jeclayn. Sidaa darteed, si loo yareeyo heerkulka ciyaartoyda isla mar ahaantaana loo buuxiyo miisaaniyadda, xadka ay la wadaagaan Slovenia, France, Switzerland iyo Monte Carlo waxay ka shaqeeyaan dhowr casinos.
Wadarta Talyaaniga waxay ka shaqeysaa 5 casinos, laakiin midkoodna kuma jiro Rome. Weyn casino ee San Remo iskuday rabta in lagu ciyaaro Monaco ama Faransiis, ilaa azino oo ku taal Campione xeebta Lugano ayaa ku taal xudduudda ay la leedahay Switzerland, casino ee San Vincent wuxuu xiraa wadada baxsiga ilaa tunnelka Mont Blanc. A 2 meelo Venedik ah dadku uma oggolaan doonaan inay tagaan Slovenia.
Caadi ahaan, kaliya qarnigii labaatanaad, Talyaanigu wuxuu ahaa mid xaq ah, kahor khamaarka si xor ah looma ciyaaro. Muddo dheer ayaa hadhay halyeeygii reer Venetian casino "Ridotto".
Dagaalkii Koowaad ee Adduunka ka dib, dowladdu waxay xirtay 59 casinos ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan xayiraad adag oo ku saabsan khamaarka tan iyo 1919. Laakiin Mussolini wuxuu fahamsan yahay waxyeellada siyaasaddan oo kale ee miisaaniyadda gobolka, sidaas darteed 1927, wuxuu si rasmi ah uga furay casino San San.
Casino San Remo wuxuu ku yaalaa daar weyn, oo loogu talagalay 1905 Eugene Ferret. Waxay ku taal maamulka degmada. Muddo dheer waxay ahayd guriga kaliya ee khamaarka ee Talyaaniga, halkaasna wuu joogay, sida laga soo xigtay Mussolini oo kaliya oo ah xaqiijinta sharciga.
Si kastaba ha noqotee, waxqabadka Talyaaniga wuxuu keenay xaqiiqda ah in 1933 la furay Casino Campione d'italia. Waxaa la dhisay 1917 oo leh soo jiidasho gaar ah, oo caadi u ah waqtigeeda. Tani waa dhisme weyn oo mustaqbal leh maanta waa casino ugu weyn Yurub.
1937, sharciyadu way yaraadeen, Venedik waxaa loo ogolaaday casinos khamaarka, laakiin halkan hoos yimaada maamulka degmada.
Kadib Dagaalkii Dunida II ee la xidhiidha khamaarista, ayaa wali ka shaqeeya dhowr casinos, laakiin dhammaantood waxay isku dayayaan in ay ballaadhiyaan ganacsiga si aad u culus.
Aad u xiiso badan waa sheekada daahfurka casino 4-aad ee San Vincent, oo ku yaal buuraha Alps. Waxay ku taal gobolka Valle d'Aosta, halkaas oo ay ku yaalliin dhaqan aad u adag oo isku dhafan oo ka socda Faransiiska iyo Talyaaniga, in Faransiiskii 1947 afti laga qaaday ay jeclaysteen inay isku dhejiyaan dhulka. Dadka deggan San Vincent waxay shardi uga dhigeen Rome inay sii joogaan Talyaaniga markay qamaarka ka muuqan doonaan. Waxayna ku furtay xawaare.
Laakiin taariikhda waxqabadyada khamaarka talyaaniga, xitaa marka loo eego xukunka degmada, waxay ogtahay daqiiqado badan oo mugdi ah. Khiyaanada la aasaasay ee shaqaalaha iyo shaqaalaha maamulka sare. Iyo 1983, xitaa waxay qabteen casino Saint Vincent iyo Sanremo xiriir la leh maafiyada. Ka dib ganacsigan adag dib-u-habeyn iyo jihada ayaa loo beddelay.
Maanta, jasiiradda Apennine waxay ka shaqeysaa 5 casinos, welina waa degmooyin, gobolladu waxay gacan ka geystaan ​​miisaaniyadda wadarta guud ee 70% faa'iidada mashiinnada ciyaarta, 50% - ciyaaraha Mareykanka, 45% - laga bilaabo Faransiis.
In kasta oo dowladda Talyaanigu aysan aadeynin tanaasulidda kaararka, haddana 2010-kii Talyaanigu wuxuu awooday inuu ku ciyaaro qolalka qamaarka ee internetka. Gargaarka noocan oo kale ah waxaa lagu caddeeyay boqollaal bilyan oo canshuur ah oo laga helay miisaaniyadda.
Maxay tahay wax cajiib ah, inkasta oo casaan yar oo Talyaani ah, iyo caasimadda aaney joogin haba yaraatee, meelahaasi waxay noqdeen nooc caan ah iyo soo jiidasho dalxiis. Guryaha raaxada leh ee gudaha leh oo qurux badan ayaa muddo dheer ahaa goobta loogu talagalay dhacdooyinka bulshada, munaasabadaha ballaaran ee dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Qalitaanka Cinwaanka: Piazza del Colosseo, 1. Waxay calaamad u tahay Roomaaniyiintii hore, dhismihii qadiimiga ahaa ee ugu cajaa’ibka badnaa, kaas oo astaan ​​u ah caasimada Talyaaniga.
Isha Trevi. Cinwaanka: Piazza di Trevi. Ilaha baroque ee quruxda badan ee qarnigii XVIII, oo loogu talagalay Nicola Salvi, munaarado ka sarreeya aagga Trevi oo ku dhowaad mitirka 26, saameynaya quruxda iyo weynaanta
Pantheon. Cinwaanka: Piazza della Rotonda. Tusaalaha ugu fiican ee naqshadaha Roomaanka, soo jiidashada bannaanka iyo qurxinta gudaha.
Fagaaraha Roman. Cinwaanka: Via della Salaria Vecchia, 5/6. Xarunta nolosha bulshada ee Rome hore waxay siisaa aragti aad ufiican nolosha qarnigii hore.
Kaniisadda Saint Paul Cinwaanka: Piazza San Pietro. Kani waa kaniisadda ugu weyn ee Masiixiyiinta adduunka iyo qaab dhismeedka ugu caansan ee Vatican-ka.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Talyaaniga iyo Talyaaniga
Talyaaniga - waa gobolka ugu dadka badan Yurub.
98% dadweynaha - Katoolik.
Talyaniga - halka uu ku dhashay nus ka mid ah farmaajo caan ka ah adduunka.
Dalka Talyaaniga waxaa ku yaal labo darajo ah: Vatican iyo San Morino.
Talyaaniga, in ka badan volcano ka badan dalalka kale ee Yurub.
Talyaani casri ah - lahjad Florentine ah, oo caan ku noqotay Dante.
Talyaaniga khariidada Yurub
0.1 Liiska ugu sareeya ee 10 Talyaaniga Online Casino
2.1 Khamaarka internetka ee Talyaaniga
2.2 Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoyda talyaaniga
3 Khamaarista Talyaaniga
3.0.1 Goobta Talyaaniga iyo asalka taariikhda gaaban
3.1 Burburinta iyo khamaarka ee Talyaaniga
3.1.1 Soojiidashada Rome
3.1.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Talyaaniga iyo Talyaaniga
3.1.3 Talyaaniga khariidada Yurub
koodh gunno ah oo loo yaqaan 'superde vegas casino codes' lama bixiyo